Semalt: Neun Steps To Planung der Website-Inhalte
Ho an'ny Websitebesitzer dia sarotra ny mampifanaraka sy mampivelatra ny hevitry ny mpampiasa azy raha miara-miasa amin'ny hafa. Na izany aza, mbola azo atao ihany koa ny manokatra Website-Content efficiens
Max Bell, tompon'andraikitra amin'ny Success Successor von Semalt ,
Fanampim-panazavana momba ny fitantanana ny zon'olombelona.
1. Aktuelle Kopie bewerten
Ny tena marina dia ny valin'ny fanamarihana farany ny kopia, satria mamaritra ny fahadisoana na ny zava-misy izay tokony hovaina. Amin'ny alalan'ny fanoloran-kevitra sy ny fametrahana ireo tanjona manokana ho an'ireny vondrona ireny, dia mora kokoa ny manome antoka fa ny tranonkala dia manome fotsiny ny fitaovana mahasoa
2. Identifikieren Sie die Zielgruppe
Ny orinasa iray tokony hahafantatra, amin'ny fomba itantanana azy, alohan'ny hamoahana ny lahatsoratra. Ny fahafantarana na ny famantarana ny tarika dia manampy amin'ny famolavolana mazava tsara ny drafitra. Mety ho marina, raha ny fampahalalam-baovao, ny olona tokony hiferenana, ilaina na mazava tsara. Izy ireo koa dia manana ny loharanom-baovao, ny sekoly ambaratonga faharoa ary ny tertiäre Zielgruppen, mba hahazoana antoka fa ny tranonkala ho an'ny mpitsidika rehetra dia azo atao.
3. Mampiasa sitemap
Niasa toy ny Blaupausen ny sitemaps. Raha tsy azony an-tranonkala dia tsy afaka manatratra ny zava-kendren'izy ireo na ny pejy manan-danja. Maro ny programa sy software-suiten izay manampy mba hamoronana sy hampirindra ny vaovao ao amin'ny tranonkala. Ireo ohatra ireo dia ohatra ny Organigramm amin'ny Microsoft Word sy ny XMind-Tools maimaim-poana plattformübergreifenden. Manomboka amin'ny Bulk-Inhalte ianao, mba hahitana raha afaka mametraka ny pejy iray manontolo na misy ny fepetra ilaina. Izany dia mety hahafahanao manitsy sy manitsy ireo fitaovana ao amin'ny tranonkala.
4. Cooperation mit anderen
Ny fifandraisana amin'ny olon-kafa ao amin'ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso dia manome antoka fa ny ao anatiny dia tsy misy grammatische diso na inona na inona ary ny zavatra hafa mahakasika azy. Ny fiaraha-miasa dia ahafahan'ny olon-kafa mandray anjara..Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-pirenena hafa Google Docs sy JumpChart dia fiaraha-miasa amin'ny Tools-Content, izay afaka manome ny valin'ny mpampiasa.
Misy olona mino fa afaka manome fahafaham-po ny fahafahan'ireo tranonkala hiresaka momba ny tantaran'ny fireneny. Ny mifanohitra amin'izany dia tokony hampatsiahy ny tantaran'ireo olon-kafa izay nahazo tombontsoa amin'ny fampisehoana ny vokatra na ny vokatra azo avy amin'ny tranokala. Ny zava-dehibe dia ny fampiharana sy ny fampianaran'ny fomba. Ny vokatra na ny serivisy dia mila fialamboly tsotsotra amin'ny tsipika mora marihitra momba ny tombontsoa entin'ny mpifanila.
Ny orinasa dia tsy tokony hampidirina votoatiny maro ao amin'ny Content, mba ho very ny lanjany na tsy hay vakiana. Ny fampidirana an'io teny ao amin'ny lahatsoratra manontolo io dia mazava ho azy fa ny mpamaky no mahita ny zavatra. Azo ampiasaina ihany koa ny fampiasana ny tenimiafina semantika ho an'ny famandrihana ny teny anglisy.
7. Mamolavola copyie-action-nao
Tokony ho endri-tsoratra ny lahatsoratra farany izay milaza ny mpitsidika hoe inona no tokony hataon'izy ireo amin'ny manaraka. Ny e-mail-adiresy na ny fifandraisana amin'ny contact dia ahafahana manao fihetsiketsehana tsotra ho an'ny mpanjifa, raha mbola eo an-dalam-pivoarana ny fandraharahana.
Ny fampidiran-kery fanohanana, sary sy sary no ahazoana antoka fa ny kopie dia tena mahasoa tokoa. Ny famakiana ny soratra amin'ny soratra lehibe kokoa na ny testimonials na ny fampiasana lisansa lisitra dia manampy ireo mpandika lahatsoratra amin'ny alalan'ny lahatsoratra. Ny soratra amin'ny kopia dia tena manan-danja amin'ny fampivoarana ny famakiana ny kopia.
Mamaritra ny fotoana voafaritra ho an'ny olona tsirairay sy ny ekipa dia mametraka antoka fa ny Projekte dia mijanona ho kurs. Ny fahafahana manao izany, dia ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny votoatin-javatra ao amin'ny sehatr'asa voajanahary mba hiasa sy hiasa manokana. Ny tokony atao amin'ny tokony ho izy dia ny tokony ho voalohany amin'ny sehatr'asa mba hametrahana ny tonony ary hamaritra izay tokony hatao amin'ny tetikasa amin'ny tetikasa. Ny fanoloran-tena dia tokony hanamarina raha toa ka tokony hampidirina am-ponja ny mpiandraikitra ny fanaraha-maso miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka
Ny fandaharanasa fananganana site dia mitaky fotoana mba ahafahana manomana sy mampihatra ny paikady. Ho an'ity fomba ity, dia mora kokoa ny maneho ny hatsarana avo lenta sy ny tsy fahampiana amin'ny tranonkala Source .